Dental Care – Page4– Healthy Life Journal
All posts tagged "Dental Care"
သွားတစ်ချောင်းရဲ့ ကြွေအထူ . . .
မေး ။ ။ လူတစ်ယောက် ပါးစပ်ထဲမှာရှိတဲ့ သွားတစ်ချောင်း ကြွေအထူက ဘယ်လောက်ရှိပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတား။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်(မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ ။ ။ သွားမှာကြွေသွားအလွှာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ဆိုတာက သွားကဖြူဖွေးနေတယ်ဆိုရင် ကြွေသွားအလွှာတော်တော်များတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။...
ငှက်ပျောသီးစားပြီးတဲ့အခါ ငှက်ပျောခွံအတွင်းသား အနည်းငယ်ကိုယူပြီး သွားတွေပေါ်ကို အချိန်နှစ်မိနစ်လောက် ညင်ညင်သာသာပွတ်တိုက်ပေးပါ။ ငှက်ပျောခွံမှာ ပါတဲ့ ပိုတက်ဆီယမ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ မဂ္ဂနိစ်တွေလိုသတ္တုဓာတ်တွေကို သွားတွေကစုပ်ယူပြီး သွားတွေကို ဖြူစင်တောက်ပြောင်စေပါတယ်။ Healthy Life ဂျာနယ်မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အပတ်စဉ် သောကြာနေ့ထုတ် Healthy Life...
နံနက်အိပ်ရာထချိန် ခံတွင်းအနံ့ဆိုး ထွက်လို့ စိတ်ညစ်နေသလား . . .
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိပ်ပျော်တဲ့အခါ ခံတွင်းထဲမှာ တံတွေးအထွက် နှုန်းလျော့ကျသွားပါတယ်။ အဲဒီအတွက် မကောင်းတဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေ ပွားများနှုန်းများလာပြီး ခံတွင်း အနံ့ဆိုး ထွက်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီအခါ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်သည်တွေအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတာကြောင့် မျက်လုံးပွင့်လိုက်တာနဲ့ သင့်ခံတွင်း...
ဖယောင်းပွတ်ထားသည့် သွားပွတ်ကြိုးက အကောင်းဆုံး
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သွားနှင့်ခံတွင်း သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရေးအတွက် သွားပွတ်ကြိုးသုံးရာတွင် ဖယောင်းပွတ်ထားသည့် အမျိုးအစားက အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း မေးရိုးနှင့်ခံတွင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်က Healthy Life ဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ “သွားပွတ်ကြိုးအနေနဲ့ ဘာမှမရှိရင်တောင် ရိုးရိုး အပ်ချည်ကြိုးကို သုံးလို့ရပါတယ်။...
အံဆုံးသွား အသုံးဝင်သလား . . .
မေး။ ။ အံဆုံးသွားက အသုံးမဝင်ဘူးလို့ ကြားဖူးလို့ပါ ဆရာ၊ တကယ်အသုံးမဝင်ဘူးလား ဆရာ။ ကိုထွေး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ။ ။ အံဆုံးသွားဆိုတာ ပုံမှန်အနေအထားမှာ သွားကထွက်ပြီး ရှိနေမယ်ဆိုရင် အသုံးကျတဲ့အထဲမှာ ပါပါတယ်။...
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. ဘာကြောင့် သွားပဲ့တတ်ပါသလဲဆရာ။ ဖြေ. “ကြာကြာဝါးမယ့် သွား၊ အရိုးကြည့်ရှောင်”ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံ ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က ဂရုမစိုက်ဘဲနဲ့ အမာတွေကို ဝါးမယ်ဆိုရင် သွားကပဲ့နိုင်ပါတယ်၊ ကွဲသွားနိုင်ပါတယ်။ သဘာဝတရားအရ ဘယ်အရာမဆို ဉာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီး...
သွားကြားပွတ်ကြိုး ဘယ်လို သုံးရမလဲ . . .
မေး။ ။ ကျွန်တော်က အသက် ၆၀ ကျော် သက်ကြီးရွယ် အိုတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အစာစားပြီးတိုင်း သွားကြားထဲ အစာညပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အစာကို သွားကြားပွတ်ကြိုးနဲ့ ထုတ်ယူရမှာ ဖြစ်ပေမယ့် ထုတ်ယူရမှာ ခက်ခဲပြီး မထုတ်တတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သွားကြားပွတ်ကြိုးကို အသုံးပြုပြီး ပါးစပ်ထဲက...
အိပ်ရာထဲ လဲနေသူ၊ လေဖြတ်နေသူများအတွက် သွားနှင့် ခံတွင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင် (မေးရိုးနှင့် ခံတွင်းခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး။ ။ အိပ်ရာထဲ လဲနေသူတွေကို သွားနဲ့ ခံတွင်း ကျန်းမာအောင် ဘယ်လို ဂရုစိုက်ပေးသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ ဖြေ။ ။ လေဖြတ်နေတဲ့အခါ၊ အိပ်ရာထဲ လဲနေတဲ့အခါ တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်...
လေဆာရောင်ခြည်သုံးပြီး သွားဖာခြင်းနှင့် ရိုးရိုးသွားဖာခြင်း
မေး. သွားဆရာဝန်တစ်ဦးက သွားတစ်ချောင်းကိုဖာတဲ့အခါ လေဆာရောင်ခြည်နဲ့ ဖာတာရှိသလို ရိုးရိုးဖာတာလည်းရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာကိုကြည့်ပြီး သွားဖာတာပါလဲ၊ လေဆာနဲ့ သွားဖာတာနဲ့ ရိုးရိုးသွားဖာတာ ဘယ်လိုကွဲပြားခြားနားပါသလဲ။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ဒေါက်တာဟန်ကျော်မိုး သွားနှင့်ခံတွင်းဘက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန်မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. သွားဖာတဲ့အခါ အသုံးပြုတဲ့...
သွားတက် သို့မဟုတ် ထပ်နေသော စွယ်သွား . . .
မေး။ ။ တချို့လူတွေ စွယ်သွားပေါက်ကြပါတယ်၊ ဒါက မျိုးရိုးလိုက်ပြီး ပေါက်တာပါလား၊ ဘာကြောင့် စွယ်သွားပေါက်ရသလဲ၊ မပေါက်အောင် ဘယ်လိုဆင်ခြင် ရမှာလဲ၊ စွယ်သွားပေါက်ရင် ဘယ်လိုနောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်တတ်သလဲ၊ စွယ်သွားကို ပြင်ချင်ရင် ကုန်ကျစရိတ်များနိုင်သလား။ ဦးသန့်ဇင်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်။ ပါမောက္ခဦးကိုကိုမောင်...